मकवानपुरमा भएको सवारी दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु | Kendrabindu Nepal Online News
मकवानपुरमा भएको सवारी दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु
२५ मंसिर २०७६, बुधबार ०९:२५
हेटौँडा , २०७६ मंसिर २५ ।
मकवानपुरको हेटौँडा र मकवानपुरगढी गरी दुई छुट्टाछुट्टै स्थानमा गएराति सवारी दुर्घटनामा परी दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई घाइते भएका छन् ।
हेटौँडा बजारबाट मकवानपुरगढीतर्फ जाँदै गरेको बा ४ ख ६३५५ नं. को टिपरले ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । मकवानपुरगढी गाउँपालिका–४, मक्रान्चुली नजिकै टिपरले ठक्कर दिँदा स्थानीयवासी ३४ वर्षीय दीपक पाख्रिनको घटनास्थलमै मुत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार दुर्घटनापछि टिपर चालक फरार छन् भने टिपर प्रहरी नियन्त्रणमा छ ।
त्यस्तै गएराति नै हेटौँडा उपमहानगरपालिका–९ पशुपतिनगरमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट एक महिलाको मृत्यु भएको छ । बाराबाट हेटौँडातर्फ आउँदै गरेको ना ४२ प ७५०६ नं. को मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा एक महिलाको मुत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । मृतकको सनाखत हुन सकेको छैन ।
सो दुर्घटनाबाट मोटरसाइकल चालकसहित दुई जना घाइते भएका छन् । घाइते हुनेमा मोटरसाइकल चालक पर्सागढी बस्ने ३० वर्षीय कञ्चन ठाकुर र चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–१० बस्ने ३५ वर्षीया शर्मिला थापा मगर रहेका छन् । घाइतेमध्ये मोटरसाइकल चालक ठाकुरको अवस्था गम्भीर छ । ठाकुरको चुरेहिल अस्पतालमा उपचार हुन नसकेपछि भरतपुर अस्पताल सिफारिश गरिएको छ ।
दुई जना, मकववानपुर, मृत्यु, सवारी दुर्घटना
Prevनागढुंगामा सुरुङको सर्भे गर्दै ठेकेदार कम्पनी
बाबुको हत्या आशङ्कामा आमा–छोरा पक्राउNext